Welded Wire Mesh, Sivan-tsivana, Wire vy, efijery Window - Huiling
Anping Huiling Wire Mesh Co., ltd. dia mpanamboatra vokatra harato tariby manana tantaran'ny 30 taona mahery.
Ny orinasa dia manarona faritra 120000 m2. Ary ankehitriny manana fitaovana 50 famokarana sy fitaovana fanandramana kalitao 5 set izahay. Afaka mamatsy tariby vita amin'ny vy, sivana kapila, tariby vy, efijery ary vokatra hafa misy harato tariby hafa mihoatra ny 1500T isan-taona.
Ny tsenanay lehibe dia: Eoropa & Amerika, Moyen Orient, Azia atsimo atsinanana ary Afrika.
Izahay dia tsy mamokatra vokatra marina miaraka amin'ny kalitao tsara sy ny vidin'ny fifaninanana!
Ny vokatry ny fametrahana ny firafitry ny modelina aperture eo amin'ny efijery
Ny firafitry ny modelina aperture dia azo volavolaina. Ny sosona fanaraha-maso kalitao samihafa dia voafantina ho an'ny efijery. Ny fepetra takiana amin'ny fikarakarana ara-teknikan'ny sosona harato omen'ny fijerena kalitao samihafa dia ny fanamiana sy ny fametrahana qualit ...
Inona avy ireo olana tokony hojerena rehefa mametraka ny velaran'ny harato
Ny fepetra takiana amin'ny fametrahana ny fefy dia ny vokatra voafantina amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso kalitao, anisan'izany ny fanoherana ny hafanana avo, ny fanoherana ny fahanterana ary ny fanoherana ny harafesina. Ny endrik'ilay tampon'ny harato dia fametrahana telo-lehibe tena tsara. Ny endrika sy ny haavon'ny harato ...